Sina indroa miampita ny renirano fanamboarana sy orinasa | XY Tower
Ny tranobe dia tsy raisina ho toy ny vokatra fotsiny fa koa serivisy. Avy amin'ny fiakarana, ny famoronana, ny fanangonana ny singa tsirairay ary ny fanaterana vokatra namboarina, XY Tower dia eo amina rojom-bidy iray manontolo.
Manampy amin'ny fampihenana ny vidin'ny tetik'asa ho an'ny mpanjifanay ny injeniera amin'ny alàlan'ny famolavolana tilikambo voatily ary koa manome antoka ny maha-mety ny firafitry ny rafitra mba hialana amin'ny fanitsiana ny tranokala.
ny famokarana manan-tsaina dia mihatra amin'ny zavamaniry eto amintsika. Ny fifehezana ny tahiry dia amin'ny alàlan'ny rafitra ERP ary ny fizotry ny famokarana manontolo dia fehezin'ny rindrambaiko Indostrialy. Ny injenieran'ny orinasa dia tena mahalala izany.
Famakiana 100% avy amin'ny Billet ka hatramin'ny Towers vita. Mampiasà bileta 100% voamarina avy amin'ny vy vy an'ny fanjakana ihany izahay.
Antoka matanjaka matanjaka sy laboratoara fanandramana maoderina
Ny tsara indrindra amin'ny fizotran'ny fonosana sy ny kitapom-bolam-bola amin'ny alàlan'ny fanenomana tariby sy ny fametahana vy mba hiantohana ny fampihavanana haingana sy ny tsy fahampian'ny fitaovana amin'ny tranonkala
Fanampiny Lashing & Choking Packing fanampiny ho an'ny kaontenera Export
Ao amin'ny Skipper Limited, atolotray ny mpanjifanay harona feno an-tsokosoko feno manomboka amin'ny 66 KV ka hatramin'ny 800 KV Towers (Circuit Single, Circuit Double, Towers Multi-Circuit mety amin'ny fikirakirana Twin, Triple, Quad na Hex Conductor). Afaka manolotra fitaovana Tower izahay isaky ny karana ary koa naoty iraisam-pirenena manomboka amin'ny BSEN ka hatramin'ny ASTM ka hatramin'ny GOST.
Ny tilikambo fampitana dia rafitra matevina, mazàna tilikambo makarakara vy, ampiasaina hanohanana ny tsipika herinaratra ambony. Manome ireto vokatra ireto izahay amin'ny alàlan'ny
Kilasin'ny herinaratra 110-330kV
Haavony nominal 18-55m
Isan'ny mitondra tarika 1-8
Ny ampahany amin'ny tilikambo rehetra dia mandalo milina hydraulic multi-tanjona izay afaka manao asa isan-karazany toy ny manety, manapoka sy manapaka. Ny milina fanodinana hydraulic miaraka amin'ny fitaovana, jig ary fametahana mifanentana dia miantoka ny fikirakirana ireo entana niondrika tsy nisy fanodikodinana. Ireo vano mitazona stratejika dia manamora ny fikirakirana fitaovana nefa tsy misy fatra ny mpiasa. Ny milina rehetra dia manana fitaovana hikirakirana ny vy mifanaraka amin'ny fepetra arahana isan-karazany ohatra ISO, ASTM, JIS, DIN.
Previous: Tilikambo fihenan'ny 500kV
Manaraka: Tarika Fitting-Pole